Seteembar | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Seteembar, 2011
Shabaab Oo Wiil Dhalanyaro Ah Curyaamisey
Seteembar 29, 2011
Ururka Al-Shabaab ayaa maanta wiil dhalinyaro ah lug iyo gacan is dhaaf ah kaga jaray deegaanka Calamada ee duleedka magaalada Muqdisho.
Boqolaal dadweyne ah ayaa isugu yimid deegaanka Calamada kuwaasi oo ururka Al-Shabaab ay ku amrreen in ay isugu yimaadeen dhul banana oo ku yaala deegaankaasi.
Maxamed Xasan Sheekh Axmed oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa ururka Al-shabaab waxa ay ku eedeeyeen in uu dhalay labo Mobel iyo waliba Bastoolad waxaana laga gooyay Lug iyo Gacan isdhaaf ah.
Qaadiga Maxkamada ee ururka Al-Shababa Sheekh Maxamed oo ka hadlay fagaaraha uu ku dhacayay xukunkaan ayaa sheegay in wiilkaan dhalinyarada ah uu ku cadaaday danbigiisa.
Arinta la yaabka leh ayaa waxa ay ahayd dadkii shacabka ahaa ee leesugu keenay deegaankaasi oo aygu mar qur ah kala cararay ka dib markii ay fiirsan waayeen dhiiga daadanayay ee wiilka dhalinyarada ahaa.
Ma ahan markii ugu horeysay oo uu ururka Al-Shabaab cuuryaamiyo wiil dhalinyaro ah isla markaana ay ku fuliyaan xukun caynkaan oo kale ah.
Shabaab Iyo Dowlada Oo Ku Dagaalameya Duleedka Buulo-Xaawo.
Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda KMG iyo Ahlu Sunna oo dhinac ah iyo Al-Shabaab ayaa waxa uu hadda ka soconayaa deegaanka Carracase ee duleedka degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
Dagaalka oo aan khaasaarihii xog rasmi ah laga heyn, ayaa waxa uu dhashay kaddib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen ciidamo ka tirsan dowladda KMG ee Soomaaliya oo dhowaan tababar ku soo qaatay Doolow, kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo.
Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo aan xiriir la sameynay ayaa inoo suura geliwaysay dagaalka socdo awgiisa waxaana la ogeyn qasaaraha dhimasho iyo dhaawac soo kala gaarey labada dhinac.
Laanqeyrta Cas Oo Sii Badineyso Howlaha Gargaarka Somaliya Ka Wado.
Guddiga caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas (ICRC) ayaa sheegay in uu kordhinayo howlaha gargaara bini’aadannimo ee ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya, oo dadka gaajada iyo macluusha la dhibaatooyina ay kordheen.
Afhayeenka ICRC Nicole Engelbrecht,ayaa sheegtay in gargaar dheeraad ah ay siinayaan 1 milyan oo qof oo ku dhibateysan koonfurta Soomaaliya dhammaanka sanadkan, ayna isku dayayaan in ay daboolaan baahida dadka abaaraha ku xoolo beelay.
Nicole Engelbrecht waxa uu sheegay in sare u qaadidda nolosha dadka ku nool deegaannada miyiga fog fog ay ku dhiiragelin karto inay guryahooda ku nagaadaan.
ICRC ayaa waxa ay ka mid tahay hay’adaha farakutiriska ee ka howlgala deegaannada ay maleeshiyada Al-Shabaab ka taliyaan.
Wadamada Arabta Oo Gargaar Deg Deg Ah Soomaaliya Gaarsiinaayo.
Baarlamaanka wadamada Carabta oo kulan ku yeeshay magaalada Doxa ee dalka Qatar ayaa sheegay in gargaar deg deg ah la gaarsiinayo Soomaaliya, si wax looga qabto xaaladaha bini’aadannimo ee ka jirta.
Prof Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaannada dowladda Soomaaliya uga qeybgalay shirka baarlamaanka Carabta ayaa sheegya in shirka oo ajanadayaashiisa ay ka mid aheyd xaaladda Soomaaliya ay ka jeediyeen warbixin ku aaddan dhibaatooyinka bini’aadannimo ee ka jira.
Xildhibaanka waxa uu sheegay in baarlamaanka wadamada Carabta ay isla garteen in si deg deg ah gargaar cunno iyo daawo ah loo gaarsiiyo Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah ee ay abaarta ka jirto.
Dhibaatada gaajada iyo macluusha ka jirta dalka Soomaaliya ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka, waxaana madaxda dalal badan ay indhahooda ku arkeen xaaladda dhabta ah ee ay Soomaalida wajahayaan, iyadoo qaarkoodna ay gargaar gaarsiiyeen.
BOQOL MEELOODO MEEL, DHIBAATOOYINKII LALA BEEGSAN JIREY QOWMIYADDA DIGILMIRIFLE. Q-3aad
Seteembar 28, 2011
Ustaad Usmaan waa halyeygii ugu horeeyey oo DigilMirifle ah oo ku can baxay fikradiisa ah “Federaalka” isla markaana noqdey ninkii ugu horeeyey ee loo diley fikradiisa oo ayna dan u aheyd umadiisa si ay u helaan madax banaani buuxda iyo u keli ahaansho maamulka dhulkooda, arintaasina waa mid ay ka soo hor jeedeen, kuwa hada ka soo hor jeeda Federaalka, rabana in ay dhiig dad cabaan.
Ustaad Usmaan markii la dilaayey oo aheyd sanadkii 1952-di, dilkiisana waxaa loo kaashadey dad wax ma garad ahaa, amaba calooshood u shaqeysteyaal ahaa.
Ustaad Usmaan asagoo lagu yiqiin xal u helida dhibaatooyinka haysta qowmiyadiisa DigilMirifle, kaashanayeyna cod karnimadiisa, af tahanimadiisa aan waagaasi lagu haynin soomaaliya qof asaga oo kale ah ama u dhigma, amaba u soo dhowaa geesinimadiisa, wuxuu had iyo jeer wadey olole ah xukun federal, si loo kala bad-baado, sharafna loogu kala noolaado dhulka soomaaliya.
Labada asbaabood ee loo diley ayaa ay kala ahaayeen:-
(A) U Doodid Had Iyo Jeer Qowmiyadda Digilmirifle.
(B) U Ban-dhigid Aduunka In Soomaaliya Ay Qaadato Mabda’a Fedelaalka.
Asagoo maalintii la dilaayey uu lahaa duulimaad uu ugu kicitimi lahaa “UN” (Unite Nation-ka) si uu khudbad ooga soo jeediyo, khudbadiisuna ay ku saabsaneyd in soomaaliya ay qaadato mabda’a “Federalizione” iyo sidii ay xuquuqdooda ku heli lahaayeen soomalida inta dhibaateysan.
Waxaa la gaarey subixii uu duulimaadka lahaa habeenkeedii, ayagoo kuwii diidanaa fikradiisa, oona u cadeyd in ay meel cidla ah fariisan doonaan hadii uu USTAAD USMAAN tago “UN”-ka oo uuna ka soo khudbeeyo, ayaa waxey qaban qaabiyeen shirqool lagu dili karo USTAAD USMAAN inta uusan u duulin UN-ka ka hor, hadii kalese dadaalkooda uu noqon doono hal bacaad ku lis, waxey habeenkii oo dhan waardiye ka hayeen gurigii uu degenaa USTAAD USMAAN oo ku yaaley “VIA ROMA” magaalada Muqdisho, rabeena si ay mar un fursad u helaan oo ay ku dili karaan, si uusan subixii ugu duulin UN-ka.
Goor ay aheyd wakhtigii salaada fajirka “subaxa” loo dareeraayey ayaa USTAAD USMAAN gurigiisa ka soo baxay si uu salaada subax u soo tukado, ka dibna uu isu diyaariyo duulimaadkiisii ku aadanaa UN-ka oo waagaas ku yaaley wadanka “Marooko” magaalo madaxdiisuna aheyd ‘Kaasa-balanka’, UN-kuna loo yaqiiney “LAKE OF NATION”, qoladii habeenkii oo dhan u diyaarsaney si ay u dilaan USTAAD USMAAN ayaa waxa ay heleen fursadii ay ku dili lahaayeen oo ay aheyd asagoo banaanka u soo baxey keligiis, oo uuna ahaa qof aan ku jirin dareen ah in la dili rabo, halkiina cadowgii USTAAD USMAAN ay ku dileen weliba gurigiisii hortiis, markey hubsadeen in uu dhinteyna meeshii ay faraaqeeyeen si aan loo arkin, markii uu waagii si fiican u dilaacayna waxaa la arkey meydkii USTAAD USMAAN oo weliba hor yaala gurigiisa hortiis.
Dilkaas waxashnimada ah ee lagu diley USTAAD USMAAN ayaa ahaa mid lagu rabey in uu socdo boobka dhulkiisii uu u dhashey, umadiisuna aan weligood ka bixin gacanta “Mahaatiri”, waana tan ilaa iyo hadda taal amaba ay ku jiraan umadiisa, ayagoo weliba ku adkeysanaya sidey xididadooda si fiican dhulka ugu qabsan lahaayeen, hada oo la joogo qarnigii 21-aad waxaa weli taal fikradiisii oo loo diley USTAAD USMAAN oo aheyd in soomaaliya qaadato nidaamka Federaalka, kuwii diley aabihii umadda DigilMirifle ayaa ilaa iyo hadda hor taagan federaalkii ayna u diidan yihiin sidii markii hore ay u diidanaayeen, welibana ay u dileen indhihii qowmiyadda DigilMirifla, ayadoo lagu jirey bil RAMADAAN, asaguna soo cusbooneysiiyey fikradii aabihii Umadda DigilMirifle, haleygaasna waxaa la yiraahdaa Dr: AHMED RASHIID.
Qore: Isaak Eeding Hassing (Isak Doolow)
Saraakiil Sare Sare Oo Shabaab Ah Oo Baledweyne Tagay
Afhayeenka Al-Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) iyo Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka tirsan hoggaamiyayaasha kooxda ayaa la sheegay inay gaareen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyagoo wata gaadiid dagaal.
Horjoogayaal shisheeye oo ka tirsan al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay sidoo kale ku sugan yihiin deegaanka lagu magacaabo Booco oo 65 km dhanka koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxaa si weyn loo hadal hayaa imaanshaha horjoogayaasha sare ee al-Shabaab, iyadoo imaanshahooda ay ku soo beegantay xilli dhaqdhaqaaq ciidan ay wadaan Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan.
Dhaqdhaqaaqa ciidan ayaa yimid kaddib markii ciidamo deegaanka u dhashay oo ku sugnaa deegaanka Hees ay ku biireen ciidamo taabacsan dowladda oo fadhiggoodu yahay deegaanka Kalabeyr, taas oo dhalisay inay dhaqdhaqaaq ciidan sameeyaan al-Shabaab.
Col. Isaaq Cali Axmed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada taabacsan dowladda ayaa Bar-kulan u sheegay inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay sameynayaan al-Shabaab, ayna u diyaargaroobeen sidii ay isaga caabbin lahaayeen weerar kasta oo uga yimaada al-Shabaab.
Dadweynaha ku nool magaalada Beledweyne iyo deegaanno ay ka mid yihiin tuulada Ceelgaal ayaa waxaa la so gudboonaaday welwel ay ka qabaan inuu qarxo dagaal dhex mara labada dhinac.
Xidhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka KMG Oo Cod Dheer Ku Sheegey In Askarta Dowlada Ay Dhibaato Ku Haayan Barakacyaasha
Mudane ka tirsan baarlamaanka KMG Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahanyahay in dadka Soomaaliyeed loo soo gumado.
Xildhibaan Maxamed Cali Diheeyo ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay haatan dhamaantood yihiin dad Barakayaal ah isla markaana ay u baahanyihiin gar gaar.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka barakayaasha ah oo ka soo baxsaday gobalada Soomaaliya ay dhibaato ku haayaan askarta dowlada waxa uuna sheegay in ay taasi ayaan daro tahay.
Waxa uu ugu baaqay dowlada KMG Soomaaliya ay arintaan wax ka qato isla markaana ay dowladu badbaadiso shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateesan.
Hadalka Xildhibaankaan ka tirsan baarlamaanka KMG Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo adayaa xili dad aad u badan ay ku soo barakkaceen magaalada mUqdisho kuwaasi oo si aad ah u dhibaateesan, isla markaana mar marka qaar ay dhibaatooyin kula ka can askarta dowlada.
Iran Oo Deeqdii Ugu Badneyd Soo Gaarsiiyay Soomaaliya.
Dalka Iran ayaa sheegtay in deeq aad ubadan oo dhanka gargaarka ah ay dhawaan gaarsiin doonto Magaalada Muqdisho si loogu gargaaro dadka abaaraha latabaalaysan.
Deeqdan ayaa Magaalada Muqdisho gaari doonta 17 maalin kadib Waxaana loogu talagalay in lagu gargaaro dadka ay macluushu hayso ee gudaha Muqdisho.
Gargaarkan bini’aadannimo oo Dowlada Iran udirayso Soomaaliya aaay shalay ka soo dhaqaaqday dekedda Bandar Cabbaas ee waqooyiga Iran, taasoo lagu wado inay magaalada Muqdisho gaarto 17 maalmood kaddib.
Sida ay sheegeen Saraakiil katirsan Dowlada Dalkaas Waxaa deeqdan iska soo aruuriyay shacabka Dalka Iran waxaana lagu wareejiyay Hay’ada Bisha Cas.
Dowladda Iran ayaa horay u geysay Soomaaliya 15 shixnadood oo gargaar ah, si wax looga qabto dhibaatada ka dhalatay abaarta ee saameysay malaayiin Soomaali ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran, Cali Akbar Saalixi ayaa horay u booqday magaalada Muqdisho, taasoo qeyb ka ah dedaallada ay Iran ugu jirto in la caawiyo dadka Soomaalida ah ee gargaarka u baahan.
Si kastaba Deeqdan Dowlada Iran ay usoo dirtay Soomaaliya ayaa meesha ka saaraysa Wararka sheegaya in Khilaaf kadhex jira Dowlada KMG iyo Dowlada Iran uu keenay in uu hakad galo gargaarkii ay Soomaaliya keeni jirtay.
Shabaab Oo Sheegatey In Dowlada Iyo Amisom Ku Fashilisey Dagaalada Mogdisho.
Xarakada al-Shabab ayaa waxa ay Sheegtay in DKMG ah Ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku fashilmeyn Weerar dhinaca Melteriga balse taa badalkeeda ay bilaabeyn Weerar dhinaca Warbaahinta ah.
Shiikh Maxamed Xasan abuu cabdiraxmaan oo ah wakiilka Gobolka Banaadir Ee Dagaalyahanada al-Shabab ayaa waxa uu Sheegay in Ciidamada DKMG ah Ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku fashilmeyn Dagaaladii ay kula jireyn dagaalyahanada al-Shabab isagoona Tilmaamay in hada ay bilaabeyn dagaal xaga warbaahinta ah.
Shiikh Maxamed Xasan abuu Cabdiraxmaan ayaa waxa uu Sheegay in Maalmihii dambe ay fariimsimaha Dowlada Weerar ku qaadayeen taasina ay ka dhigan tahay Sida uu tilmaamay in awoodooda ay wiiqantay waxa uuna Xusay in Ciidamada al-Shabab ay Xiligaan diyaar u yihiin in dagaalo ay kala Soo horjeestaan Kuwa AMISOM iyo Dowlada.
Wakiilka Gobolka Banaadir Ee Dagaalyahanada al-Shabab Shiikh Maxamed Xasan abuu cabdiraxmaan ayaa waxa uu ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed inay ku garabsiiyaan Dagaalada ay kula jiraan Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM.
Hadalkaan Kasoo yeeray Shiikh Maxamed Xasan abuu cabdiraxmaan ayaa waxa uu imanayaa xili ay al-Shabab baneeyeen fariisimihii ugu Muhiimsanaa oo ay Muqdisho kaga Sugnaayeen inkastoo ay Sheegaan inay ugu baxeyn Xeelad Dagaal.
Shabaab Oo Soo Bandhigtey Diyaaradii Kismaayo Ku Soo Dhacda
Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta iclaamiyay inay soo bandhigi doonaan diyaarad nooca wax basaasa ah oo aanay cidina wadin, taas oo ku dhacday duleedka magaalada Kismaayo.
Gaadiid ay ku rakiban yihiin codbaahiyayaal ayaa maanta ku dhex wareegayay jidadka magaalada Kismaayo, kuwaas oo dadweynaha magaalada ku wargelinayay inay maalinta Jimcaha ee soo socota yimaadaan fagaaraha Beerta Xorriyadda, halkaas oo lagu soo bandhigi doono burburka diyaaradda.
Cabdiraxmaan Sheekh Muudey oo ka mid ah horjoogayaasha al-Shabaab ee Kismaayo waxa uu sheegtay inay lidka diyaaradaha ku soo rideen diyaaradda xilli ay sawirro ka qaadeysay xaafado ka tirsan magaalada.
Balse, warar lagu kalsoon yahay ayaa tilmaamaya in diyaaradda ay si iskeed ah ugu dhacday meel 13 km u jirta magaalada, waxaana dad reer miyi ah oo arkay burburka diyaaradda ay ku wargeliyeen al-Shabaab.
Ciidamo ka tirsan al-Shabaab oo goobta gaaray ayaa qaaday qeybihii ka haray diyaaradda, iyagoo geeyay saldhigga dhexe ee magaalada Kismaayo.
Diyaaradda waxaa ku xirnaa aalado sawirrada qaada, waxaana la rumaysan yahay inay ka soo kacday badda, walow aan la garin karin dalka laga leeyahay.
Sabtidii la soo dhaafay ayaa diyaarad aan cidina wadin ay weerar dhanka cirka ah ku qaadday isla aagaasi, gaar ahaan gagida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, waxaana weerarkaas ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Seteembar, 2011.